General dingana fanarenana ny pachinko parlors, endri-javatra-mahita amin'ny alalan'ny-dalana
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ General dingana fanarenana ny pachinko parlors, endri-javatra-mahita amin'ny alalan'ny-dalana
pachinko efi-trano Mba antsointsika hoe ny fironana amin'ny orinasa iray manontolo satria orinasa ara-barotra dia tsy maintsy ho mahasoa isan'andro. Raha mihevitra toy izany, fa ny fandikan-teny dia afaka ihany koa ny mihevitra fa sitrana fe-potoana isan'andro, eo aminy, ny andro moa iny an mialoha ny tombony lehibe noho ny mahazatra, dia ho marina ny daty ny fanangonana voalaza ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko. Ao amin'ny famoriam-bola toy izany ny andro, mba tsy ho fatiantoka lehibe, dia aoka isika hijery ny fomba ny mamantatra fa ny sitrapony ho andro efa sitrana.
pachinko koa ny efi-trano hanatrika ny rehetra, Mino aho fa misy marina tokoa ny andro. Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny fanangonana daty, nahita toeram-pivarotana maro izay mitovitovy faharoa ny antsasaky ny volana. Izany dia mitovy arakaraka ny fotoana ny fivarotana ny zava-nitranga sy ny Xintai fanoloana. Ny Ahoana no hamantarana andro vitsivitsy manaraka vanim-potoana toy izany fampahiratana ianareo, dia mbola fantsika fanitsiana.
sisin-tsipika, toy ny manapaka ny, fa mampiavaka mafy fantsika fanitsiana sitrana fotoana, misy ampahany izay tiako foana mijery hafa. Izany, raha ny payout intsony dia avy hatrany, dia ny hoe na tsy. Ao amin'ny pachinko teny fa ny payout, antsoina hoe TY. Ny nanapaka ny TY, dia manao fanitsiana ny fihantonan-javatra hafa noho ny voalohany, ka Chirase ny baolina, dia ny fomba hampihenana ny tahan'ny hiditra ny voalohany sy ny fahavalony.
koa, raha Re Chirase ny baolina, koa vao mainka niharatsy ny baolina araka ny jackpot, I baolina avy manjavona avy hatrany. Ao amin'ny famerenana dingana ny pachinko efi-trano, dia lasa be dia be ny toy izany faladiany fantsika fanitsiana. Ny manavaka ny fantsika, fa dia tena sarotra, dia mihodina ny fomba toka imbetsaka, raha ny fijery fa dia avy hatrany ny baolina intsony, dia afaka tsara kokoa ny teny mafy Raha toa ianao ka milalao pachinko mahazatra. Koa satria hoy ianareo: fa ny endri-javatra mitranga ao amin'ny fantsika fanitsiana ny fe-potoana famerenana, tsarovy azafady zavatra rehetra. Ho an'ny
Hanemono, dia tsy maintsy ho tena nanao maso toy izany hevitra. Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha toy ny CR milina, ka misy ihany koa ny mety fa ny fanitsiana an-dalana ny Horukon, momba azy io koa mba ho tsara na dia tao amin'ny takona izany ny lohany.
-bahoaka faran'ny herinandro sy ny fialan-tsasatra, pachinko ny vokatra koa ianareo tahaka ny fantatrareo Ny fivarotana dia ho maro. Izany no indrindra, toy ny toeram-pivarotana sy ny mandroso gara toeram-pivarotana, dia matetika no mirona mba hitahiry ny mpanjifa ao na dia amin'ny andavanandro. Suburban toy ny toeram-pivarotana, tao amin'ny toeram-pivarotana izay tsy tokony hihazakazaka amin'ny andavanandro, hanova hihataka iray amin'ireo asabotsy sy alahady, na koa misy toeram-pivarotana izay hanatanteraka ny raharaham-barotra, toy izay nangonina.
Ary, mba ho sitrana na inona na inona pachinko daty parlors, misy andro efa raikitra. Izany dia, Xintai zorony avy nandritra ny fialan-tsasatra sy ny Golden Herinandron'ny nisokafan'ny mandra-pahatongan'ny vao nohavaozina manaraka koa, fa mandra-pahatapitry ny volana amin'ny 25 isam-bolana koa. Mandra ao amin'ny faha-25 nisesy isam-bolana ny fety, satria na dia hita vary avo varotra tombony lehibe no andrasana, dia ho sitrana foana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko lafiny.
Ankoatra izany, ireo izay liana amin'ny gazety, sns Xintai koa dia, mba milalao avy manokana, dia tsy ilaina ho vonoina. Milina tolo-dal?na dia tsy maintsy ho nanangona koa, dia ho sitrana lalao tsy azo ial?na mijoro. Xintai dia na nikapoka tamin'ny andro voalohany Xintai, izany dia ny hoe misy ny olana mety fa ny tsara indrindra mba hamely amin'ny fotoana tony kely. Ary ny Fahatakarana ny Hevitry ny
pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny fanangonana daty, azafady tandremo sao ho simbasimba fampiasam-bola. Na izany aza, na tsia ny daty famoriam-bola, afa-tsy ny efa hitantsika, satria tsy fantatro be indrindra, ka hivoaka ilaina mba namely tanteraka. Mba hizara amin'ny kely indrindra ny fampiasam-bola, ny fivarotana ny zava-misy sy ny hombo Ny tena tsara, dia lasa ho hita na dia kely. Noho izany dia milalao, et al., Izany dia tsy mila vonoina. Milina tolo-dal?na dia tsy maintsy ho nanangona koa, dia ho sitrana lalao tsy azo ial?na mijoro. Xintai dia na nikapoka tamin'ny andro voalohany Xintai, izany dia ny hoe misy ny olana mety fa ny tsara indrindra mba hamely amin'ny fotoana tony kely. Ary ny Fahatakarana ny Hevitry ny
pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny fanangonana daty, azafady tandremo sao ho simbasimba fampiasam-bola. Na izany aza, na tsia ny daty famoriam-bola, afa-tsy ny efa hitantsika, satria tsy fantatro be indrindra, ka hivoaka ilaina mba namely tanteraka. Mba hizara amin'ny kely indrindra ny fampiasam-bola, ny fivarotana ny zava-misy sy ny hombo Ny tena tsara, dia lasa ho hita na dia kely.